ho 20 tapitrisa ariary izany tany amin’ny fitoriana. Ny 3 febroary izao moa no hiakatra fitsarana ity raharaha ity, raha ny fampitam-baovaon’ny fianakavian’ny lasibatra hatrany manoloana ireo mpanao gazety. Efa nadoboka am-ponja vonjimaika ilay raim-pianakaviana ary izao miandry ny fitsarana azy any am-ponja izao. Araka ny tsiliantsofina heno dia toa raharaha hafa no nahavoarohirohy ity raim-pianakaviana ity kanefa izao nivadika trosa be izao.
Miandrandra ny fitsarana ara-drariny ny havan’ity raim-pianakaviana ity, mba tsy ho roboka anaty kolikoly avo lenta, hoy hatrany izy ireo. Voalazany moa fa atody miady amam-bato ihany izy ireo manoloana ny fanararaotana notanterahin’ny teratany vahiny. Raha ny fahefa-mividy eo amin’ireto ankohonana kely ireto dia milaza izy ireo fa raha ny famerenana ny lelavola 20.000.000 ariary no fepetra hisintonan’ny mpitory ny fitoriana dia tsy manana velively izany izy ireo. Nohamafisiny hatrany moa manoloana ireo mpanao gazety fa tsy naka izany vola izany izy ireo ka tsy manan-kamerenana. Andrasana moa ny fanehoan-kevitry sy ny valin-kafatra avy amin’ny andaniny mba hisian’ny fandanjana ny vaovao amin’ny gazety.